RB:Rohingya Exodus ( Leaked Video) | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
RB:Rohingya Exodus ( Leaked Video)
Posted by danyawadi on December 16, 2012 in News, Videos
Posted on December 12, 2012 by tunaung
Filed under: Burma | LeaveaComment »
Posted on December 10, 2012 by tunaung
Posted on December 9, 2012 by tunaung
Crying Colours By ALDO
Posted on December 7, 2012 by tunaung
Posted on December 6, 2012 by tunaung
The UN’s top humanitarian official has said conditions for displaced Burmese Muslim Rohingyas are “dire”, and called on Burma to improve them.
Posted on December 4, 2012 by tunaung
m-mediagroup.com:သဲချောင်း မွတ်စလင် ဒုက္ခသည် စခန်းကို အဓမ္မ ဖိအားရွှေခိုင်းရာ လက်မခံသဖြင့် ရဲများ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက် ညနေ့(၅) နာရီတွင် စစ်တွေ သဲချောင်းရှိ မွတ်စလင် ဒုက္ခသည်စခန်းများမှ ဒုက္ခသည်များကို ဝေးလံသည့် ဆေးသမားကျေးရွာသို့ အတင်းအဓမ္မ ပြောင်းရွှေခိုင်းရာ မွတ်စလင်မ် ဒုက္ခသည်များမှ မသွားလိုကြောင်း ပြောသဖြင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် ရဲများ သေနတ်များဖြင့် ပစ်ခတ်မှု့ကြောင့် အနည်းဆုံး မွတ်စလင်မ် ဒုက္ခသည် (၅) ဦး ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိသွားသည်။
BBC: The Burmese monks who preach intolerance against Muslim Rohingyas
Posted on November 24, 2012 by tunaung
Posted on November 23, 2012 by tunaung
ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လက ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အာဏာပိုင်တွေက အမှု ၅ မှုနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာထွန်းအောင်(ခေါ်) နုရာဟက်ကို စစ်တွေခရိုင် တရားရုံးက အလုပ်နဲ့ ထောင်ဒဏ် ၁၂ နှစ် ကျခံစေဖို့ မနေ့က အပြီးသတ် အမိန့် ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။
Posted on November 22, 2012 by tunaung
Obama speech at University of Yangon – DVB Live
U.S President Obama arrival in Burma – DVB Live
Posted on November 16, 2012 by tunaung
Myanmar’s reforms are more about the interests and longevity of the country’s military than about public welfare.
Inaweek’s time, US President Barack Obama is scheduled to visit Asia’s – and perhaps the world’s – hottest destination: Myanmar. He should “see” the ugly realities of the country’s reforms that lie just beneath their surface and hear the cries of the wretched of Myanmar, such as the Muslim Rohingya and the Christian Kachins.
မန်းတလေး နန်းတွင်း ဗလီနှင့် ပတ်သက်ပြီး အထောက်အထား မတွေ့ရှိခဲ့ဟု ယဉ်ကျေးမှု တက္ကသိုလ် ပါချူပ်(ငြိမ်း) သမိုင်းပညာရှင် ဦးတင်စိုးမှ ပြောကြားခဲ့သည်ကို ဖြေရှင်းချက်
Baydar Lam‘s Facebook စာမျက်နာမှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်
ဘုရားစူးမိုးကြိုးပစ် ယဉ်ကျေးမှု တက္ကသိုလ် ပါချူပ်(ငြိမ်း) သမိုင်းပညာရှင် ဦးတင်စိုးမှ မန်းတလေး နန်းတွင်း၌ ဗလီနှင့် ပတ်သက်ပြီး အထောက်အထား မတွေ့ရှိခဲ့ဟု ပြောကြားခဲ့တာကို ၈.၁၁.၂၀၁၂ ရက်ထုတ် NEWSWEEK ဂျာနယ်နှင့် အင်တာဗျူးတွင် ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။အထောက်အထားဆိုတာက
Posted on November 14, 2012 by tunaung
BBC:UN ‘failed Sri Lanka civilians’, says internal probe
Special Report – Witnesses tell of organized killings of Myanmar Muslims
Posted on November 13, 2012 by tunaung
PAIK THAY, Myanmar | Sun Nov 11, 2012 9:14pm GMT
By Francis Wade Nov 07, 2012 1:13PM UTC
The violence in western Burma between Rohingya and Arakanese has evolved in recent weeks, and now there isadistinct possibility thatareligious war is unfolding that could spread far beyond Arakan state.
RFA: First Chairperson of ABFSU_U Rashid Centenary
Video Record of Aung Mingalar Village torch by Rakhine Terrorist
Posted on November 5, 2012 by tunaung
Filed under: 88 Student leaders, Burmese Muslims | LeaveaComment »
BBC:ရခိုင်အရေးနဲ့ ပက်သက်တဲ့ ဒေါ်စုသဘောထား
ရခိုင်အရေးနဲ့ ပက်သက်တဲ့ ဒေါ်စုသဘောထား
Filed under: Burmese Muslims, Daw Aung San suu Kyi. NLD, Democracy, democratization, Ethnic Cleansing, Human Rights, ICC, Myanmar | LeaveaComment »
NST: Rohingya appeal to world leaders
KUALA LUMPUR: Rohingya living in Malaysia have madeastrong plea to world leaders to stop the ethnic cleansing of their countrymen in the Myanmar state of Arakan.
Read more: Rohingya appeal to world leaders – General – New Straits Times http://www.nst.com.my/nation/general/rohingya-appeal-to-world-leaders-1.165974#ixzz2B8AvnDOC
myanamarmuslim.net:ကုလားတွေပါ၊ ကုလားတွေပါ ဆိုတာကို ကျွန်တော် ၀မ်းနည်းပါတယ်၊ အိမ်ရှင်တွေ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဧည့်သည်တွေပါလို့ ပြောကြားခြင်း ဟာလည်း လုံးဝ လက်ခံနိုင်စရာ မရှိပါဘူး (ကိုမြအေး)
Read more >>Filed under: Burma | LeaveaComment »
VOA: ရခိုင်အရေး မြန်မာသံတမန်ကို ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဌာန ဆင့်ခေါ်
Posted on November 2, 2012 by tunaung
ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနက ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗြိတိန် နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးရဲ့ သံရုံး ယာယီ တာဝန်ခံကို ဆင့်ခေါ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
DVB: Clashes or ethnic cleansing?
သတိ၊ စေတီတော်မြတ် များအား တိုက်ခိုက်ကာ ပဋိပက္ခ ဖန်တီးမည့်သူရှိ
Posted on November 1, 2012 by tunaung
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များနှင့် လူများစု ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အကြား အထင်အမြင် လွဲမှား၍ ပဋိပက္ခများဖြစ်စေရန် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက စီစဉ်လျက်ရှိပြီး ၎င်းတို့ လုပ်ဆောင်မည့်ထောင်ချောက်မှာ တန်ခိုးကြီးစေတီတစ်ခုအား ဗုံးဖြင့် တိုက်ခိုက်၍ အဆိုပါ တိုက်ခိုက်မှုအား အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များ ပြုလုပ်သယောင် စွပ်စွဲ၍ နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်မှုတစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း တာဝန်ကျ အမည်မဖေါ်လိုသူ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထံမှ သတင်းရရှိသည်။
မြန်မာ့အရေးကျွမ်းကျင်သူ ဘာတီးလင့်တ်နာ (Bertil Lintner) နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း (အပိုင်း-၁)
by Yangon Press International on Monday, 22 October 2012 at 00:37 ·
ယခုလမော်ကွန်းမဂ္ဂဇင်းတွင် တိုင်းရင်းသားရေးရာ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၊ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုပပျောက်ရေး စသည်တို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် မြန်မာ့ အရေးကျွမ်းကျင်သူ ဘာတီးလင့်တ်နာ (Bertil Lintner) နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါသည်။
Filed under: Burma, Burmese Muslims, Equal Rights, Ethnic Cleansing, Ethnic Minorities, Fascist, Genocide, Hitlar, Holocust, Human Rights, Hypocrisy, ICC, Individual Freedom, OIC, Rakhine | Tagged: wirathu | LeaveaComment »
Filed under: Burma, Ethnic Cleansing, Genocide, Rakhine | Tagged: Burma, Ethnic Minorities, Human Rights, Myanmar, Racial Discrimination, Rhingya | LeaveaComment »
Filed under: Burma | Tagged: Burma, Burmese Muslims, hand grenade, karen state, Kawkareik, kyone doe, Masjid, mosque, Myanmar, terrorist attack | LeaveaComment »
myanmarmuslim.net: ရခိုင် အကြမ်းဖက်သမားများ သံတွဲ မြို့ကို ဆက်လက် အကြမ်းဖက် မီးရှို့နေ
သတင်း- TK ( မြန်မာမွတ်စလင်မ် သတင်းစဉ်)
မြို့ပေါ်ရွာသစ်ကုန်မှာ ရှိတဲ့ လူကြီးတွေကို မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး က `ခင်ဗျားတို့ ရပ်ကွက်ကိုစောင့်နေတဲ့ ကင်းတွေကို ဖယ်ရှားပေးပါ။ အိမ်ပေါ်ကိုတက်ရှာဖို့ တွေလိုရှိရင် အားလုံးကို ဖမ်းမယ်။´ ဟု ခြိမ်းခြောက်သွားခဲ့သည်။ ရပ်ကွက် သူ ရပ်ကွက်သားများအနေနဲ့ အဲလို လူကြီးတွေ လာသတိပေးသွားတိုင်း မီးရှို့ တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဖြစ်နေတဲ့ အတွေ့အကြုံအရလို့ မြိုခံတွေ့ စိုးရိမ်နေကြတယ်မြို့စွန်မှာရှိတဲ့ အနည်းငယ်ရှိတဲ့ မွတ်စလင်အိမ်တွေကို ဖယ်ခိုင်းပြီး ဖျက်စီးလိုက်ပါသည်။
Filed under: Burma | Tagged: Human Rights | LeaveaComment »
Filed under: Burma, Crimes against Humanity, Criminal, Genocide | Tagged: Ethnic Cleansing, Rohingya | LeaveaComment »
Filed under: ASEAN, Burma, Burmese Muslims, Ethnic Cleansing, Genocide, Refugees, Religion | Tagged: Rohingya | LeaveaComment »
RFA:ABFSU First Chairperson U Rashid Centenary
Posted on October 16, 2012 by tunaung
U Thant – Cuban Missile Crisis Eases
Posted on October 14, 2012 by tunaung
Posted on October 10, 2012 by tunaung
BBC HARDTALK – U THEIN SEIN
Posted on October 3, 2012 by tunaung
BBC:Burma’s Thein Sein ‘would accept Suu Kyi as president’
Posted on September 30, 2012 by tunaung
Burmese leader Thein Sein has told the BBC he would accept Aung San Suu Kyi as president if the people vote for her
A poignant memory of Myanmar
Posted on September 29, 2012 by tunaung
Our columnist has had her heartstrings tugged in many countries, the latest being Myanmar, where one particular afternoon etchesapoignant memory.Wait! I’m scared!” I say, prompting Zaw Zaw to respond withasmile.“Don’t worry. It’s just my mamma.”
I swallow, torn by conflicting thoughts. In my first visit to Myanmar, I had become good friends with our guide Zaw Zaw. We bonded over our mutual passion for photography. On impulse, I had asked if I could see how the locals lived.
Posted on September 28, 2012 by tunaung
Posted on September 27, 2012 by tunaung
by LYNN on Sep 12, 2012 • 10:33 pm
Posted on September 24, 2012 by tunaung
Systematic Ethnic Cleansing in Burma
Posted on September 14, 2012 by tunaung
Origin of the Tribes of Chittaging Hill Tract (CHT)
Introduction: Arakan wasamedieval kingdom located at the edge of South Asia becameaprovince of Burma after the Burmese invasion in 1784 and the subsequent annexation of it with Burma. To the people of India and Bangladesh, Arakan became sadly memorable for the tragic massacre of the Moghul prince Shah Suja and his entire family by the Arakanese king Sandathudamma.
Posted on September 2, 2012 by tunaung
Posted on August 24, 2012 by tunaung
Filed under: Burma | 1 Comment »
Posted on August 18, 2012 by tunaung
Interview with Rohingya Part 2
arabnews.com:OIC suspends Syria’s membership, will take Rohingya case to UN
Posted on August 16, 2012 by tunaung
At Ramadan dinner, Obama calls Clinton aidea‘patriot’
Posted on August 12, 2012 by tunaung
Aljazeera:’Mass graves’ for Myanmar’s Rohingya
Posted on August 9, 2012 by tunaung
FFP:The Failed States Index 2012: The Book
Posted on August 2, 2012 by tunaung
By J. J. Messner, Nate Haken, Krista Hendry, Patricia Taft, Kendall Lawrence, Tierney Anderson, Raphaël Jaeger,Natalie Manning, Felipe Umaña, Amelia Whitehead
HRW.ORG:“The Government Could Have Stopped This”
This report describes how the Burmese authorities failed to take adequate measures to stem rising tensions and the outbreak of sectarian violence in Arakan State. Though the army eventually contained the mob violence in the state capital, Sittwe, both Arakan and Rohingya witnesses told Human Rights Watch that government forces stood by while members from each community attacked the other, razing villages and committing an unknown number of killings.The report is based on 57 interviews conducted in June and July 2012 with affected Arakan, Rohingya, and others in Burma and in Bangladesh, where Rohingya have sought refuge from the violence and abuses.
Posted on July 28, 2012 by tunaung
Posted on July 24, 2012 by tunaung
Written by Sai Latt
Posted on July 15, 2012 by tunaung
Posted on July 8, 2012 by tunaung
Posted on July 7, 2012 by tunaung
Posted on July 5, 2012 by tunaung
Posted on July 4, 2012 by tunaung
All abuse is about power, because you never abuse people who have more power than you. I WAS reading about the trial of Jerry Sandusky,awell-known and much-loved football coach at Penn State University in the US, for abusing some of the young boys under his charge.
Mandalay Monk – Brothers from different religions
မန္တလေးဘုန်းကြီး ၊ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၁၂
ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာ ဘာသာကြီး လေးရပ်အနက် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ သန်း ပေါင်း ခြောက်ထောင်ရှိရာ ခရစ်ယန်ဘာသာ သန်းပေါင်း ၂၁၀၀၊ အစ္စလာမ်ဘာသာ သန်းပေါင်း ၁၃၀၀၊ ဟိန္ဒူဘာသာ သန်းပေါင်း ၁၀၀၀၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ သန်းပေါင်း ၃၇၆ သန်း ဟု စာရင်းကို တွေ့ဖူး၏။
ကျန်ဦးရေတစ်ချို့ ဘာသာမဲ့နေကြ၏။ တစ်ချို့ နတ်ကိုးကွယ်၏။ ဤသို့ကြားဖူး၏။ ကမ္ဘာ့တိုက်ကြီး လေးတိုက် အာရှ တိုက်၊ ဥရောပတိုက် စသည် ကမ္ဘာအရပ်ရပ် ဘာသာစုံပြန့်နှံ့လျက်ရှိ၏။ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့အတွက် ဗုဒ္ဓဘုရားက မေတ္တာကို အထူးဦးစားပေး ဟောခဲ့သော်လည်း တစ်ချို့ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့သည် ဘာသာခြားတို့အပေါ် မေတ္တာမထားနိုင်ကြဘဲ မုန်းတီးရေး ဝါဒကို ဖန်တီးလိုကြ၏။
Posted on June 27, 2012 by tunaung
Asia Times:True stripes revealed in Myanmar
CHIANG MAI – The timing of Myanmar opposition leader Aung San Suu Kyi’s return to Europe aftera24-year absence could have been better. She leaves her country amid turmoil in its western Rakhine State, where sectarian rioting has claimed scores of victims. The period of unrest has shedarare light on the volatile tensions that have simmered for years between the country’s dominant Buddhist population and its Muslim minority.
Burmese police taking sides, abusing powers: UN
Posted on June 16, 2012 by tunaung
The United Nation’s Special Rapporteur for Human Rights in Burma, Tomas Quintana says he has received information that police forces are not following orders, in the conflict zone in Arakan state.
Aljazeera:Islamophobia and the fear of ‘the other’ in Myanmar
Chiang Mai, Thailand – The mob that set upon and killedagroup of Muslims ridingabus through western Myanmar on June3displayedadepravity normally the hallmark of the country’s military. News reports that emerged in the wake of the incident, allegedly in response to the gang rape and murder ofaBuddhist girl by three Muslim men days before, described the ten victims ofafrenzied beating being urinated upon before the bus was set ablaze.
Myanmar President Speech for Emergency Condition in Rakhine State
Aljazeera:Myanmar declares state of emergency in west
Reuters:Buddhist vigilantes kill9Muslims in Myanmar bus attack
Posted on June 5, 2012 by tunaung
YANGON | Mon Jun 4, 2012 6:59am EDT
(Reuters) – Buddhist vigilantes in western Myanmar attackedabus and killed nine Muslims, police said on Monday, the deadliest communal violence in the region sinceareformist government took powerayear ago.
Posted on June 4, 2012 by tunaung
ရခိုင်ပြည်နယ် သံတွဲမြို့ကနေ ရန်ကုန်မြို့ကို မနေ့ ညနေ (၅) နာရီလောက်က ထွက်ခွာလာတဲ့ ခရီးသည်တင်ယာဉ်ကို တောင်ကုတ်-သံတွဲလမ်းဆုံမှာ ဒေသခံရခိုင်လူမျိုးတွေက တားဆီးပြီး ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် (၁၀) ဦးနဲ့ ကြားဝင်ဖြန်ဖြေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် (၁) ဦးကို အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
BBC:Suu Kyi warns against ‘reckless optimism’ on Burma reforms
Posted on June 2, 2012 by tunaung
Burmese opposition leader Aung San Suu Kyi has warned against ”reckless optimism” over reforms in the country.
Roy Hodgson: racism at Euro 2012 must be tackled by officials
England manager Roy Hodgson insists he will leave it Uefa and match officials to take action if any his players are racially abused during Euro 2012.
ဗမာ (သို့ ) မြန်မာစိတ်ဓာတ်
Posted on May 26, 2012 by tunaung
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ပန်းတောင်းမြို့နယ်ရှိ အနောက်ဗလီကို အမည်မသိ လူအချို့က ညစဉ် ၈ နာရီနှင့် ၁၀ နာရီဝန်းကျင်ခန့်တွင် ခဲများဖြင့် ပစ်ပေါက်နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း ပန်းတောင်းမြို့ခံ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
“ဒီလ ၁၈ ရက်နေ့က စဖြစ်တာပါ။ ဖြစ်ဖြစ်ချင်း ၃ရက်လောက်တော့ ရဲ ၅-၆ယောက်လာတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း မလာတော့ဘူး။ အခုရက်ပိုင်း ခဲနဲ့ပေါက်တာ ပိုဖြစ်လာတယ်။”ဟု အမည်မဖော်လိုသူ ပန်းတောင်းမြို့ခံတစ်ဦးက myanmarmuslim.net သို့ပြောကြားသည်။
Bo Xilai And The Return Of Politics By Fareed Zakaria
Posted on May 22, 2012 by tunaung
The storm over the blind activist Chen Guangcheng has understandably captured the world’s attention in the past week. But an event of much greater significance remains the ouster of Bo Xilai, the powerful party boss of Chongqing. The rise and fall of Bo is part ofamuch larger and potentially disruptive trend in China — the return of politics to the Chinese Communist Party.
Read more: http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,2113800,00.html#ixzz1vbBHebQO
Requesting ABIM and WAMI to investigate the “fake” picture of destroyingaBuddhist Monastery in Bangladesh
SOURCE of Pictures : Tun Nainghttp://www.facebook.com/#!/tun.naing.311
Reuters:Myanmar’s Suu Kyi to address British parliament in June
www.malaysiakini.com:A London-based NGO report ‘War on Want’ appears to back Tenaganita chief Irene Fernandez’s(below) Jakarta Post interview claim that migrant workers in Malaysia are ill-treated.Based on interviews with 30 migrant women from Burma, the NGOreported that the textile and electronics industries in Malaysia “are dangerously negligent in enforcing legal standards of wages and working conditions for migrant workers”.
Algeria: The revolution that never was – People & Power – Al Jazeera English
Posted on May 18, 2012 by tunaung
Algeria: The revolution that never was – People & Power – Al Jazeera English.
Ultranationalism and crimes against humanity
Posted on May 16, 2012 by tunaung
thestar:The real answer to refugee woes
Posted on May 14, 2012 by tunaung
KUALA LUMPUR: Malaysia feels voluntary repatriation and re-integration of returnees are practical solutions to the problem of refugees facing the Muslim world.
Foreign Minister Datuk Seri Anifah Aman said countries in the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) should work together and assist each other to address this issue.
Posted on May 6, 2012 by tunaung
ငါတို့သည် ရှေးမြန်မာဘုရင်များ လက်ထက်ကတည်းက တိုင်းကျိုး ပြည်ကျိုးကို ဦးဆွေးဆံမြည့် ထမ်းဆောင်ခဲ့သူများဖြစ်၏။
ငါတို့သည် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ အဆင့်ဆင့်များတွင်သာမက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင်သော ပွဲသိမ်းလွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲကြီးတွင်လည်း မဆုတ်မနစ် ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူများဖြစ်၏။
ဘာသာရေးပဋိပက္ခဖြစ်အောင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ တိုက်ခိုက်နေတာတွေ ဖန်တီးနေတာတွေကို သတိမူကြပါ။“လူတစ်ယောက်အနေနှင့် မိမိတစ်စုတစ်ဖွဲ့၏ အတွေးအခေါ်အယူအဆကို လေးစားကြည်ညိုယုံမျှနှင့် မပြီး။ အခြားတစ်ပါးသောသူများ၏ အတွေးအခေါ်အယူဆများကိုလည်း ကျိုးကြောင်းခိုင်လုံမှု မရှိပဲ ဝေဖန်နှိပ်နှယ်ခြင်း မပြုသင့်” ။ (အသောကကျောက်စာ) ။ Read more »
Malaysiakini:Burma moving toabrighter future
Myanmar’sTurn – 101 East – Al Jazeera English.
INSIGHT-India’s Wild East unprepared for new Myanmar
Posted on February 22, 2012 by tunaung
MOREH, India, Feb 22 (Reuters) – As dusk falls onalonely police station in the eastern tip of India,ayoung policeman nervously keeps an eye on the Arakan hills above him, dotted with poppy fields.
This entry was posted on December 16, 2012, in အထူးကဏ္ဍ, ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံတကာသတင်း, နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများ နိုင်ငံသားဖြစ်ရေး
In Politics there is No Permanent Friends or Enemies, Only Permanent Interests. →